Global Voices teny Malagasy » 15 taona ny Global Voices! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Desambra 2019 5:44 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell, Ivan Sigal Nandika Andriamifidisoa Zo
15 taona izay isika no tato! Amin'ny taonan'ny alika izany 110 . Amin'ny taonan'ny aterineto, efa ho arivo e.
Koa satria tonga amin'ny faha-15 taona isika dia maka fotoana izahay hisaorana ny vondrom-piarahamonina manerantany mandray anjara sy ireo mpamaky sy mpanohana nanome ho an'ny Global Voices hery sy angovo haharetana. Hatramin'ny taona 2004 isika nahavita ireo tantara lehibe indrindra sasantsasany teto amin'izao tontolo izao. Efa ho 100.000 ny lahatsoratra navoakantsika, nanangana sampana sasantsasany natokana hanomezana vahana ireo vondrompiarahamonina ifotony sy tsy ampy solontena hampiasa media nomerika  sy hiaro ny zo antserasera , ary hanangana vondrom-piarahamonina mpandika teny  miasa amin'ny fiteny mihoatra ny 51. Raha tsy nisy anareo, tsy no nisy ny Global Voices.
Ampio izahay hamita ny 15 taona manaraka. Ny tena tianay lazaina amin'izany dia hoe—mila ny fanampianareo izahay. Ny fanomezana avy amin'ny olona tsirairay no hanampy anay hikajy ny fahaleovantenanay sy hamela anay hahasahy hihalehibe sy hiova. Miangavy tohano izahay  anio!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/12/145726/
 hanomezana vahana ireo vondrompiarahamonina ifotony sy tsy ampy solontena hampiasa media nomerika: https://rising.globalvoices.org/
 hiaro ny zo antserasera: https://advox.globalvoices.org/
 vondrom-piarahamonina mpandika teny: https://globalvoices.org/lingua/
 tohano izahay: https://globalvoices.org/donate/